Agenda - Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
16-18 martsa 2021 | 9:00 maraina ka hatramin'ny 6:00 hariva ET
Ny fotoana rehetra dia faritra atsinanana (ET) atsinanana
Talata, Martsa 16
Misokatra ny efitrano fampirantiana
9:00 maraina - 9:10 maraina
Fampirantiana, fivoriana sy tamba-jotra
10:00 maraina - 11:30 maraina
Webinar: Fahafahana amin'ny asa aman-draharaha sy tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana asa any Florida
Famaritana: ireo mpitantana orinasa lehibe dia hizara ny heviny momba an'i Florida ho toerana misy ny orinasa voalohany.
Sekretera ny varotra any Florida
Filoha & CEO, Enterprise Florida, Inc.
Filoha & CEO
Filoha lefitry ny birao
Filoha Lefitra Fahatelo
6: 00 ora
Famaranana ny Grand Hall
Aorian'ny ora: Azo idirana ny sehatra virtoaly aorian'ny ora fisehosehoana handraisana ireo mpitsidika amin'ny faritra samihafa. Azonao atao ny mitsidika trano rantsan-kazo sy mangataka fihaonana amin'ireo mpampiranty mandritra io fotoana io.
Alarobia, Martsa 17
9:00 maraina - 9:05 maraina
Webinar: fotodrafitrasa sy lojika tsy manam-paharoa any Florida
Famaritana: Fantaro ny fomba anomezan'ny fotodrafitr'asa Florida orinasa ho fototra hivarotana ny entany sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa eran-tany, indrindra ireo any Amerika.
Filoha sy CEO
Antenimieran'ny varotra any Florida
Filankevitry ny seranam-piaramanidina Florida
Fikambanan'ny mpivarotra sy mpiadidy Florida
Alakamisy, Martsa 18
Webinar: Hub Innovation any Florida
Famaritana: ny akademia sy mpandraharaha monina any Florida dia hiresaka teknolojia farany manimba an'izao tontolo izao.
Seza, varotra iraisam-pirenena & fampandrosoana
Birao mpitantana ny EFI
Filankevitry ny Teknolojia any Florida
Mpanorina, Filoham-pirenena ary Lehiben'ny biraon'ny siantifika
Mianara bebe kokoa momba ireo teknolojia vaovao miorina ao amin'ny State of Florida!
Ny Institute for Sensing and Embedded Network Systems Engineering (I-SENSE) dia mitarika hetsika manerana ny oniversite amin'ny Sensing sy Smart Systems, iray amin'ireo andrin'ny fikarohana efatra an'ny FAU. Ny iraka I-SENSE dia ny hampiroborobo ny fahombiazan'ny fikarohana amin'ny Sensing sy Smart Systems; ary hampivelatra, hanehoana ary hampiasana vahaolana ara-teknolojia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Ny ekipa dia manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana, fametrahana ary fitantanana fotodrafitrasa mahatsapa tambajotra. Ny iraka dia tarihin'ny ekipa matanjaka mifehy ny fampianarana izay misy mpikambana dimy, mpiara-mianatra sivy, mpikaroka postdoctoral telo, mpampianatra maherin'ny 60, ary mpanampy mpikaroka mihoatra ny roapolo. Ny asan'ny ekipa dia tohanana amin'ny alàlan'ny AFRL, NSF, NIH, NIST, DOE, NOAA, ary ireo mpiara-miombon'antoka monisipaly sy indostria.
Ny Violet Defense dia mampiasa ny herin'ny hazavana ultraviolet hiarovana ny habakabaka isan'andro amin'ny otrikaretina manimba amin'ny famonoana hatramin'ny 99.9% an'ny E. coli, Salmonella, MRSA, C. diff., Norovirus, C. auris, ary coronavirus. Natao hanamora ny famonoana otrikaretina, ny lisitry ny vokatra SAGE dia manome disinfection UV an'ny habakabaka sy rivotra avo lenta ho an'ny sehatr'asa isan-karazany, ao anatin'izany ny fahasalamana, ny fampianarana K-12, ny fampianarana ambony, ny fotodrafitrasa, ny fandraisam-bahiny, ny tranon'ny governemanta ary ny fiara fitaterana maika.
Violet Defense dia manome ny vahaolana Xenon UV pulsed tokana izay azo apetraka ao anaty efitrano maharitra, mamorona fomba mitohy hiatrehana ny filan'ny famonoana otrikaretina. Vahaolana mavitrika amina vahaolana finday dia manolotra fomba hitondrana ny otrikaretina UV amin'ny fotoana sy ny toerana ilainao azy amin'ny fangatahana. Ny teknolojia misy patanty ao ambadiky ny Violet Defense dia ahafahana mampiditra amin'ny fomba mahomby ny vahaolana amin'ny tontolo iainana rehetra.
Neobiosis, LLC dia orinasam-pampandrosoana fifanarahana biomedika manokana sy orinasa mpamokatra (CDMO) miaraka amina toeram-pamokarana roa ao afovoan-tanànan'i Gainesville ary laboratoara Fikarohana sy Fampandrosoana hita ao amin'ny Ivontoerana biotechnolojia Sid Martin UF Innovate any Alachua, FL. Ny ifantohan'ny Neobiosis dia ny fitokana-monina sela, sela ary vesatra ivelan'ny sela (EV), miaraka amin'ny mety ho fanafody, avy amin'ny tavy perinatal (teraka) nomena, ao anatin'izany ny tadin'ny tadim-poitra, ny randran'ny tadim-po sy ny ranoka amniotique. Ny anarana Neobiosis ("fiainam-baovao") dia nalaina avy amina andiam-panandramana antsoina hoe Parabiosis ("miara-miaina") izay nahitana fa ny sela, sela ary EV avy amin'ny mpanome tanora iray dia azo ampiasaina hampiroborobo ny fahasitranan'ny olon-dehibe. Ny Neobiosis dia mamokatra vokatra vaovao avy amin'ny fiterahana salama sy feno, ho an'ireo fikambanana mpanjifa izay maniry handray vokatra biomédical na dia eo aza ny fisedrana ara-pitsaboana eken'ny FDA ho fivarotana eo amin'ny tsena manerantany. Neobiosis dia manolo-tena ihany koa hampandroso ny fantsom-panafody an-trano momba ny fananana ara-tsaina sy ny fanafody biolojika.
** Azo ovaina ny fandaharam-potoana.